नेपाल आज | मित्र राष्ट्र पाकिस्तानसँग लड्न नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती गर्नु गलत (भिडियोसहित)
पदम सुन्दर लिम्बु
ब्रिटिस गोर्खा आर्मी एक्स–सर्भिसमिन्स अर्गनाइजेसन (बिगेसो)
ब्रिटिस गोर्खा आर्मी एक्स सर्भिसमिन्स (बिगेसो)का काम कामकारबाही के कस्ता छन् ?
हामीले उठाएको एजेन्डा अरुको भन्दा फरक छ । अरु गोर्खाहरुले रोजीरोटी र पेन्सनसम्बन्धी छन् । तर हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि कुरा उठाएका छौं । राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुग्ने त्रिपक्षीय असमान सन्धि सम्झौता भएको छ । त्यो नै खारेज होस भन्ने हाम्रो चाहना हो । असमान सन्धि सम्झौता खारेजीको माग गरेर नेपालको सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेका छौं । नेपाली युवालाई विदेशी सेनामा पठाउनु भनेको नेपाली युवा बेचेको नै हो । बिगेसोले उठाएको कुरा हाम्रो स्वाधीनतासँग जोडिएको कुरा हो । २०३ वर्षदेखि नेपाली युवा विदेशी भूमिको रक्षाका लागि लडे । अब एक आयोग गठन गरेर सबै क्षतिपूर्ति असूल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
राज्यले नेपाली युवालाई रोजगारी दिन पनि नसक्ने अनि गोर्खा भर्तीको पनि विरोध गर्नु कति जायज होला ?
अरु गोर्खाले हाम्रो जस्तो कुरा उठाएकै छैनन् । हामीले अन्याय र असमान चाहिँ कसरी भएको छ त ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेका छौं । यसका लागि हाम्रो वकिल फडिन्द्र कार्की हुनुहुन्छ । उहाँ र उहाँको टिमले गहिरो अनुसन्धान गर्नु भएको छ । त्रिपक्षीय असमान सन्धि सम्झौता नै हो भन्ने कुरा छ । त्यो त्रिपक्षीय भनेको पहिले नै नेपाली युवा लैजाने विषयमा नेपाल भारत र ब्रिटिसबीच भएको थियो । यो खारेज गरेर नेपाली युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक अवसर दिनु पर्छ । त्यो विकल्पसहित हामी आएका छौं ।
नेपाली युवाहरुले खाडीमा कति दुःख पाएका छन् । चेलीहरु अफ्रिकामा बेचिएका छन् । दैनिक बाकसमा युवाको शव आउँछ । त्यो भन्दा त गोर्खा सैनिक कै अवस्था ठीक छ नी हैन ?
हालैमा दुई तीन सय मात्रै गोर्खा बेलायती सेनामा जाने हुन् । तर २०३ वर्षदेखि नेपाली युवा बेचिएका छन् । २०३ वर्षदेखि नेपाली युवा बेचिएका छन् । त्यो पनि सरकारले सम्झौता नै गरेर बेचिएको छ । बेचिएकोलाई हेर्ने हो भने समस्यामा परेका युवाहरुको अवस्था अझ नाजुक छ । विश्वयुद्धदेखिको हिसाब निकालौं त कति गोर्खा मारिएका छन् । बर्मामा, फिजीमा पनि गोर्खाहरुलाई ठूलो अन्याय भएको छ । बर्मा, फिजीका गोर्खाहरुलाई युद्धमा होमाएर छाडिएको छ । आज त्यहाँका गोर्खाको कुनै संस्कृति छैन । कुनै पहिचान छैन । न राष्ट्रियता छ न भाषा छ । केही पनि छैन । यसको जिम्मा नेपाल सरकार र ब्रिटिसले लिनु पर्छ । यो नेपाल राष्ट्रको सार्वभौममाथि नै हमला हो ।
नेपाली गोर्खा भारतीय सैनिकमा भर्ती हुने अनि मित्रराष्ट्र पाकिस्तानसँग लड्न जानु कति जायज हो ? जुन प्रस्तावका लागि पहिले गोर्खा बेलायतले लिन्थ्यो त्यो अहिले छैन ।
के थियो पहिलेको सम्झौता ?
बेलायतले नेपाली गोर्खा लिँदा उसको देशमा गृहयुद्ध भएमा, उसको देशमा अरु देशले आक्रमण गरेमा गोर्खा प्रयोग गर्ने भन्ने थियो । तर अहिले त उसले सबैभन्दा खतरा ठाउँमा गोर्खा पठाउँछ । इराक, अफगानिस्तान जहाँ पनि गोर्खा पठाउँछ । अर्को कुरा त मित्रराष्ट्रसँग लडाइएको छ । त्यसैले यो असमान छ भन्ने हो । सन्धिलाई नै मिचेर दम्भका कारण नेपाली युवालाई लडाउन पाइँदैन ।
यो विषयमा तपाईंहरुले बेलायत सरकारसँग कुरा गर्नुभएको छ ?
यो विषयलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं । अहिले पिस मेथडबाट यो कुरालाई प्रारम्भ गर्दैछौं ।
बिगेसोले भारतीय सेनामा काम गर्ने गोर्खाका बारेमा पनि बोल्छ ?
बोल्छ । हामीले गोर्खाहरुको बारेमा मात्रै होइन, आम नेपाली युवाको बारेमा बोल्दै आएका छौं । मूलत हामी राष्ट्रको पक्षमा बोल्दै आएका छौं । असमानताभित्रको कुराहरुमा हामी बोल्छौं । अर्को कुरा त्रिपक्षीय सम्झौताको कुनै डकुमेन्ट पनि भेटिएको छैन । सिंगापुरमा त कुनै सम्झौता बिना नै नेपाली युवा गएका छन् । नेपाल राष्ट्रलाई नै अपमान गरेर नेपाली युवा लगिएको छ । २१ औं शताब्दीमा यो त मानवबेचबिखन हो ।
अरु गोर्खाले यो कुरालाई कसरी लिएका छन् ?
उहाँहरुले पेन्सन र जीवीकाको कुरा उठाउनु भएको छ । हाम्रो कुरा बिस्तारै उहाँहरुले उठाउनु हुनेछ । मूल कुरा राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता नै भएन भने के का लागि लड्ने ? यो कुरा सबैले बिस्तारै बुझ्नु हुनेछ भन्ने मैले महशुस गरेको छु ।
नेपाली युवा बेलायतले लैजान्छ । त्यसबापत नेपाल राष्ट्रलाई बेलायतले दिने चाहिँ के हो त ?
यहि हो मुल कुरा । असमान त्रिपक्षीय सन्धिमा केही कुरा पनि छैन । १९६९ सम्म नेपालले सलामी पाउँदै आएको थियो । नेपाल राष्ट्रले पाएको देखिन्छ पहिले । अहिले अन्त्य भएको छ । युवा बेचेर राज्यले पैसा थाप्ने कुरा थियो । अहिले पनि नेपाली युवा लगेर विभिन्न युद्धमा होम्ने काम भइरहेको छ ।
गोर्खा र बेलायती सेनाले पाउने तलब सेवा सुविधा फरक छ भन्ने गरिन्छ । भिन्नत कति छ ?
भिन्नता त हदभन्दा पनि माथि छ । अपमान छ । समान सन्धिकै कारण यो सबै भएको हो । नेपाल राष्ट्रलाई नै सन्धि गरेको हुनाले यस्तो भएको हो । हामी बिगेसोले रुखको कुरा गर्छ । अरुले पातको कुरा गरेका छन् । असमानताभित्र पनि असमानता छ । पेन्सन मात्रै समान पाएर पनि समानता हुँदैन । युवा भनेको शक्ति हो । २०३ वर्षसम्म नेपाली युवा लगेर विदेशीले आफ्नो देश समृद्ध बनायो, हामी सधै गरिब भएका छौं । यो हुन हुँदैन ।
यदि बेलायतले विगतको सन्धि बमोजिम नै गृहयुद्ध वा बाह्य आक्रमणमा मात्रै गोर्खा प्रयोग गर्यो भने हालको अवस्थालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ ?
पहिलो नम्बर कुरा, असमानतालाई नै निरन्तरता दिने कुरामा छन् । त्यो कुरापट्टि पनि जाला । तर हामी यो प्रथा नहटाई हामी छाड्दैनौं । सबैलाई मान्य हुने आयोग गठन गरौं र अन्त्य गरौं भन्ने सोचेको छौं । बेलायत वा भारतमा रहेका नेपाली युवाहरुको मात्रै कुरा होइन । आम नेपाली युवाको कुरा हामी उठाइरहेका छौं ।
तपाईंहरुका मिसन पूरा गर्न के के कार्यक्रम छन् ?
हामी पिस मेथडमा छौं । हामीले मुद्दा दर्ता गरेका पनि छौं । अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । वैचारिक कुरालाई जनमानसमा लैजान सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गर्न लागेका छौं । माघ ११ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि छ । कला साहित्यबाट पनि हामीले कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । स्वदेश र विदेशमा पनि काम गरिरहेका छौं ।
बिगेसोले भनेझै गोर्खा भर्ती बन्दा भयो बेलायत जाने युवा खाडी जान विवस हुन्छन् । यसबाट के फाइदा भयो र ?
सामान्य सोचमा आधारित हुने हो भने त्यस्तो देखिन्छ । सामान्य सोचभन्दा माथिबाट हेर्दा अर्को देखिन्छ । हामी आफै युवाहरुलाई रोजगारी दिन्छौं । विकल्पसहित हामी आएका छौं ।
हाम्रो देश धनी भएको भए त युवाहरु नै बेलायत जाने थिएनन् नी हैन ?
हो, जाँदैन थिए । धनी हुनलाई त्यस्तै असमान सन्धि सम्झौताले रोक्यो । हाम्रो जस्तो सुन्दर देश गरिब कसरी भयो ? यो अनौठो हो । दुई घण्टा हिँडदा जाडो गर्मी दुवै हावापानी पाइन्छ । हिमालयको देश हो नेपाल । यस्तो सुन्दर देशलाई गरिब बनाइयो ।
तपाईंको जस्तो कुरा माओवादीले पहिले उठाउने गथ्र्यो । अहिले माओवादी सरकारमा छ । सरकारले यस्तो काम किन नगरेको होला ?
वर्तमान सरकारप्रति पनि मलाई विश्वास छैन । हामी त खारेज गर्छौैं । सरकारले जे गरोस् । २१ औं शताब्दीमा कुनै पनि देशले आफ्ना युवालाई अर्को देशको दास बनाएको पाइएको छैन । नेपालमा यो भइरहेको छ । अहिले त यो कुरा प्रचण्डले उठाउन चाहँदैनन् । गोर्खा भर्ती गलत नै हो । सिंगापुर र ब्रुनाइ त कुनै सन्धिविपरीत नै लगिएको छ । यसकारण यो खारेज गर्नु पर्छ ।
१९४७ को बेलायत र भारतले सन्धि गरे । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ल्याएर ल्याप्चे पनि लगाउन दिइयो । यस्तो अपमान छ । अब त महिला पनि लैजाने कुरा भइरहेको छ ।
पदम सुन्दर लिम्बु ब्रिटिस गोर्खा आर्मी एक्स–सर्भिसमिन्स अर्गनाइजेसन (बिगेसो) गोर्खा आर्मी नेपाली युवा